Kaayyoon keenna tokko -
Kaayyoon keenna tokko
Hin faca’inaa lammii koo
Gamtaan haa sochoonuu
Walii haa tumsinuu
Yoggasii kan moonuu!! (2)
Dhaabbannee fiduuf bilisummaa
Hifannee hin dhiifnuu yoomumaa
Goota abaaboo abaaboo
Gabrummaa deebite gaboo
Goota abaaboo falmataa
Gabrummaa of irraa gataa!!!!!
Qabsoon hedduu ni hadhooftii
Hin fidnaa hadhaa dhandhamaatii
Gootni meeqaa Wareegas kaffalleetii
Ganzaba guurrattee isaan gad nu dhiittii
Isaan gad nu dhooftii
Qabeenna hattee wal hachiiftee
Soba haasoftii amma itti bariitee!!
Bara baraanuu maluma jijjiirtii
Ilmaan durii ilmaan masaafintii
Ilmaan durii ilmaan makuwaanintii
Ilmaan durii kan abbaa lafaa
Kan durii durii kan ammaa fafaa!!!!!
Tan teessumatti jibbine
Kaatee maa nutti sirbine
Maalif siyaasa siyaasa jenne!!!!!
Hawwiin koo isimaa
Eennutu gadi dhiitama?
Hunduu ka’ee haa finciluu
Gabrummaan eennuunuu hin maluu
Dhaloonnis hin dhaaluu
Dargaggoo jabaadhuu jabeessi irree
Bilisummaan galuuf egeree
Argachuu qabaadaa bilisummaa
Argachuu qabaadaa birmadummaa
Wawarraaqii qabsoon argamaa
Gabrummaa caccabsii darbadhuu
Jajjabaadhuu Rabbii guddaa kadhadhuu!!!!!(2)
Previous Deliberately creating confusion in the name of the OLF is a criminal act
Next Oromo/Ogaden: Authoritarian Government in Ethiopia Risks Triggering Civil War